एनआरएनमा तै चुप मै चुप कति सम्म ? – www.EUnepal.com
HomeArticleएनआरएनमा तै चुप मै चुप कति सम्म ?
एक जना अभियन्ताका अनुसार “गत फ्रान्कफर्ट जर्मनी क्षेत्रीय सम्मेलनमा भिजन २०२० को एक पक्षबाट खुब बिरोध भो तर भित्र उनीहरुले नेपालबाट बोलाएका उन्सत्तरी जना नेपाली के प्रयोजनका लागि बोलाइयो ? तिनीहरुको खर्च कसले बेहोर्छ ? अनि उनीहरुको सम्मेलनमा भूमिका के थियो ? त्यो बिषयमा हाल बोलेन, प्रश्न सोधेन, लिस्ट मागिएन किन किन ? तिनीहरु त्यसको उपादेयता सुद्ध गर्न सकेका छैनन् अझै । त्यो प्रश्नले उनीहरु तर्सन्छन, डराउछन र भाग्छन ।”
एकजना अभियन्ताका अनुसार गत फ्रान्कफर्ट जर्मनी क्षेत्रीय सम्मेलनमा भिजन ट्वान्टीको एक पक्षबाट खुब बिरोध भो तर भित्र उनीहरुले नेपालबाट बोलाएका उन्सत्तरी जना नेपाली के प्रयोजनका लागि बोलाइयो ? तिनीहरुको खर्च कसले बेहोर्छ ? अनि उनीहरुको सम्मेलनमा भूमिका के थियो ? त्यो बिषयमा हाल बोलेन, प्रश्न सोधेन, लिस्ट मागिएन किन किन ? तिनीहरु त्यसको उपादेयता सुद्ध गर्न सकेका छैनन् । त्यो प्रश्नले उनीहरु तर्सन्छन, डराउछन र भाग्छन । उनीहरुको ब्यापारको गांठि कुरो त्यहि रहस्यभित्र छुपेको छ । अहिलेको पदको मरिहत्य त्यहि अदृश्य ब्यापारको लागि हो । नेपाली समाजको भलाइ गर्छन यिनले ? चाहिएमा यिनका एकएक उपक्रमको फाइल छ हामीसँग । त्यहि खेतिको लागि अहिले एनआरएनए युरोप क्षेत्रमा लुछाचुडी चलेको हो ।
त्यो ब्यापारले नै यताका अभियन्ताको अर्को व्यापारको प्रगतिमा टेवा पु¥याई रहेकोमा यहा पदको हानथाप छ । एउटै पदमा तीन जना एउटै पदको लागि मरिहत्ते गरेका छन् । दाम्लो चुडालेका छन् । त्यहा गुमाउनु पर्ने भएको भए ति पछि सर्थे, हच्किन्थे । त्यहा इमान्दार र नया दावेदारलाई आफ्नो मानब ब्यापारको च्यानल खल्बलिने भएकोले पर्न दिदैनन् । त्यहाँ इमान्दार र नयाँ प्रवेशी अनुहारहरु पनि छन् । अहिलेसम्मको तथ्यलाई हेर्दा उनीहरु खट्ने र एनआरएनएको गरिमालाई उचो राख्नु पर्छ भन्ने मध्येका पात्र हुन् । तर इमान्दार मतदाताहरुले बिबेक नपु¥याउने हो भने बिबादास्पद छबि बनाएका कुपात्रहरुले उनीहरुलाई के जित्न देलान, गाह्रो छ । त्यसको लागि एउटा शर्त छ उनीहरुका शर्तहरु स्वीकार गर्नु र भाष्माशुर भएर नेपाल र यहाको च्यानलमा रयाई – ठ्याई मिलाउनु ! बस अनि चुनाब जित्न सजिलो हुन्छ ।